Ugbo mmiri nke ugbo ala zuru oke site na BMA | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara39 KırklareliIgwe ọkụ eletrik zuru ezu nke ụwa site na BMA
14 / 09 / 2019 39 Kırklareli, General, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
firstlọ ụgbọ ala mbụ zuru ụwa ọnụ zuru oke
Ogige ụgbọ mmiri 22 dị na ndepụta ntụrụndụ nke BMA Teknụzụ nke na-arụ ọrụ na 33 n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ụwa. Na 4 dị iche iche shipyards na Turkey dị iche iche na oru BMA Netherlands, Russia, Bulgaria, anọgidewo na mba ndị dị ka Bangladesh oru ngo.
Teknụzụ BMA, nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-edozi ihe n'ụgbọ ụgbọ mmiri na mpaghara eletrik, akpaaka na sistemụ eletriki, na-enye ngwakọ ngwakọ, ọkụ eletriki ala, Nlekọta Mkpu na Njikwa Njikọ, Njikwa Consoles na injinịa na inye ọrụ nke ngwaahịa ndị a n'ime oke nke ntụgharị. na ọrụ nkwado azụmaahịa, ndị injinia 30 na-arụ ọrụ na R & D etiti.
Karịsịa, R & D-eme ekele na ọtụtụ pụrụ iche oru ngo rụrụ na Turkey na-adịbeghị anya Ọdụdọ Systems Integrator ka họọrọ BME Technology, Multipurpose Amphibious Assault Ụgbọ mmiri bụ kasị ụgbọ mmiri wuru maka Turkish Navy TCG Anatolia, ndị kasị ibu okomoko yachts emepụta Turkey (85 mita), ndị kasị ibu ụgbọ mmiri ga-arụpụtara ke Turkey (mita 123, 640 njem), ndị kasị ibu ugbo emepụta Turkey (200 mita) na-ewere akụkụ dị na-asụ ụzọ oru dị ka full electric tug ga-akpa na ụwa.
Nzube nke Navtek A.Ş. Usoro ọkụ eletriki, akpaaka na ngwa nke ụwa mbụ zuru - Zeetug - nke BMA nyere BMA nke akọwapụtara nke ọma. Ike niile nke ụgbọ mmiri chọrọ site na batrị 1,5MWh. Nke a na - eme ka igwu mmiri ahụ rụọ ọrụ na - ewepụtaghị ikuku gas ọ bụla ma belata ụgwọ ọrụ ọrụ.
Ọnụnọ nke ụgbọ mmiri Kurtaran Tugboat na TRNC, Eastern Do Easternu
A na-eji engine MTls Rolls-Royce na ọdụ ụgbọ mmiri…
Ọrụ nke ịchekwa ụgbọ mmiri na TRNC…
Ule ohuru nke BTSO Asansör
Audi na-ewebata Audi ala eletriki eletrik eletrik nke mbu
Akpa Ugbo Ala nke Uzo Na-akpa na Sweden
Umu Oke Ugbo Ogologo Uwa kacha elu nke uwa bu!
Obere mgba ọkụ ọkụ mgba ọkụ
Amphibious mwakpo ụgbọ mmiri
Igwe ọkụ eletrik zuru ụwa nke mbụ
Sistemu Njikọ na Sistemụ Njikọ